hindi project for class 10 by Bhavesh Sharma 29849 views
, ICT Personnel at Act Now Communication Team
BUHARI ON RELIGION
Ì nwere ego nsogbu? gị mkpa a mbinye ego iji kwụọ ụgwọ ụgwọ? Ọ bụ gị na ihe ọ bụla ego nsogbu? Mgbe ahụ ị na-nri iyi. Anyị na-aha na ikike ụlọ ọrụ, anyị na-enye mgbazinye ego na a ala mmasị ọnụego nke 2% ndị mmadụ n'otu n'otu, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ n'okpuru a doro anya na ihe kwere nghọta usoro na ọnọdụ. Kpọtụrụ anyị taa site email na: (dianagilbert38@gmail.COM)
1. “Okpukpe abxghị ihe aga-ejide aka iji kewaa, iji megbuo mmadu maqbụ inweta nkwado karia n’ụzq n’ezighi ezi”. 4 Jenụwarị, 2015. “Etu anyi chọrọ ka obodo anyị a bụ Naijiria di bụ ebe anyị niile ga-anọ na-enwe aịụrị ma na-etokokwa Chineke ọnụ. Chineke ji ike niile ga-enyere anyị aka ime ka obodo anyị dị etu anyị siri were chọọ”. 4 Jenụwarị, 2015. “Ọrụ ndị gọọmentị bụ ime ka e nwee udo na nchekwaba n’ala anyị na-agbanye agbụrụ maqbụ okpukpe onye. Ihe a bụ ihe dịịrị anyị niile ọkachasị taa anyị na-enye Chineke ekele”. 4 Jenụwarị, 2015 “Na ndụ m niile, e kwenyere m na onye qbxla nwere ikekere ife Chineke dika okwukwe ya siri dị“. 4 Jenụwarị, 2015.“Oru ndị gọọmentị abụghị ihe gbasra okpukpe” 4 Jenụwarị, 2015. BuhariN’IHE GBASARA www.actnow.ng “Obi bụ m sọọsọ aịụrị na ịtụ mmamma nke afọ a bụ nke wekọtara ụmụafọ naijiria okwukwe ha dị iche iche ọnụ na-agbanyeghị na ọ bụ nke e meren’ ụka kraisti. Ndi ụka kraisti, ndị na-ekpere Allah nakwaazi ndị nwere okwukwe ọzọ na-agbakọ etu a kwa afq, iji kelee Chineke ji ike niile. Nke a bụ ihe okwesịrị ibụ”. 4 Jenụwarị, 2015. KEDU ECHICHE BUHARI GBASARA OKPUKPE? “O gosiri ihe ha bụ; ụdị ndị a ekwesighị ka a hapụ ha ka kpụọ ugwu anyị n’ala. O doro anya site n’ihe ha na-ekwuputa na ha abụghị ndị na-eso ụzọ Chineke. Ha achọghị qganiru obodo anyị nakwa ndi no n’ime ya. A bụ m onye na-ekpere Allah ma a na m akuzikwa maka kraisti. A ghọtakwaziri m na okpukpe abụọ ndị a chọrọ ezi udo n’etiti ha abụọ dịka o siri gbasata ndu mmadụ.” Vanguard; 8th Mee, 2014. “Mkpamkpa ndị ‘Boko haram’ na-akpa agbasaghị okpukpe. O nweghi okpukpe na-akwado igbu na imeru ndị aka ha dị qcha ahụ. Mmadụ ije gbuo ndị mmadụ n’ụlqụka gasi, ahia, n’ọdụ ụgbqala na ije n’ụlọ akwụkwọ gbusia ụmụaka nọ n’ụra na-eti ‘allahu akbar!’ nwere ike ịputa otu n’ime ndia; na ọ maghị ihe ọ na-ekwu maqbụ okwenyeghị na ya. ya bụ, o weghi ka o siri gbasata okpukpe.” Channels TV. 10 Jenxwarị ,2015. EKPEMEKPE
2. BUHARI Ọ ỌCHỌRỌ IME ALA ANYỊNAIJIRIA KA Ọ BỤRỤ OBODO N’EKPERE ALLAH?. Ebubo nke eboro Gen. Muhammadu Buhari na ọ bụ isi ahụrụ kwaba okpu n’okpukpe ‘Islam’ nke chọrọ ịtọgha ndị ala anyị niile n’ikpere Alla bidoro n’afọ ise gara aga. Nke bụ eziokwu bụ na: Ihe ndị a bụ ihe ndị kpughere eziokwu: • Buhari enweghi mgbe o jiri sị a ga-eme Naijiria ọgaghi ekwe ọchịchị. • Ọ bụ onye ndu ndị PDP, Alhaji Lawal kaita, kwuru na Naijiria agaghi ekwe ọchịcị ma emesia nhọpụta ọkwa ọchịchị n’afọ 2011. • Ọ bụ onye nkwuputa okwu Jonathan, Rueben Abati, kwuru na ọ bụ Buhari kwuru nke a. KEDU IHE BUHARI MERE MAKA EBUBO ABATI BORO YA? • Buhari gbara Abati akwụkwọ, (The Guardian, publisher of the libelous) (sint ID 18 37/2011) • N’ihi arịrịọ Jonathan, Buhari kwetara ịnatu akwụkwọ ikpe ahụ. • Na 11 Julaị 2013, ‘The Guradian’ kwuru na Abati kwetara na o boro Buhari ebubo ma rịọkwaa mgbaghara maka ya. BUHARI Ọ KPỌRỌ NDỊ ABUGHỊ NDỊ MUSLIM ASI? • N’ime ndị gọvanọ iri na itoolu (19) Buhari họpụtara dịka onye isi ala, iri na otu (11) bụ ndị ụka Kraiti. Ọtụtụ ndị na enyere ya aka gburugburu ya bụkariri ndị ụka Kraisti. • Buhari kwenyere na ọ dị mma ka ahapụ onye ọbụla ka okpere Chineke ya dịka okwukwe ya siri dị n’ihi ya q jụrụ idebanye aha Naijiria dịka otu n’ime mba ndị na-ekpere Allah (Organisation of Islamic countries) OIC n’aha ichafụ. MBA BUHARI AKPQGHỊ NDỊ ‘MUSLIM’ ASỊ! Ọ bụ nwafọ nke gbagoro ezi mbọ n’ikwalite ala anyị a bụ Naijiria. Bụrụkwa onye ji umeala na ịdịkọ n’otu arụ ọrụ. Ụmụafọ nd[ okenye abụọ Buhari jiri hiri isi bụ Gen. Yakubu Gowon na Lt. Gen.Theophilus Danjuma, GCON. Ha abụọ bụ nd[ ụka Kraiti, ma nọrọkwazia ndụ. N’ihi ya ana-adụ onye ọbụla bụ onye eziokwu ka o kwuo nke bụ eziokwu na ebubo a eboro Buharị. KEDU IHE BUHARI NWERE IKWU MAKA NDỊ BOKO? “Itugbu ndỊ mmadụ n’ogbunigwe bụ ajọ obi ma ya fọdụzia nke ụbọchị ‘Christmas’. Ya mere, onye ọbụla bụ onye udo ga-akatọ agwa ọjọọ a ma chọọ kwa mkpochapụ ụdỊ dỊ otu a”. This Day Live; 26 Dicemba 2011 “A maghị m onye Boko Haram ọbụla, nke m ji ekwe na e nwere okpukpe ọbụla ga-anọ n’igbu na n’ila akụnụba n’iyi” Punch; 8 Nọvemba, 2012. KEDU IHE KWESIRI IBU ỌRỤ NDỊ NDỤ ỤKA? IKWU EZIOKWU!!! “Ka ọnu ndị amụma niile nọ n’obodo a meghee, ka olu niile ekechiri ekechi meghekwaa, bulagodu na-egobiri gi, wụsa ihe ndị ahụ ma kwupụta akaraka ụmụ anyị ndịa. Kamakwa nnam ga-achịm ụmụnnem anwụsịa, onye mba ọzọ chịa m ka Ezinaụlọm dịara m”. Rev. Fr. Ejike Mbaka 31 Dicemba, 2014. “Ọ bụrụ na nwoke a na-eriju afọ ma ụmụ ya eburu ọnụ, Nwoke ahụ otosiri ịbụ nna? RevF.R. Ejike Mbaka 31st December, 2014 “Ụfọdụ ndị ndụ ụka na-ere ike ha ji ebuamụma dịka Jacob siri were maka ji ree abụm isi nwa ya: Ejizi otite mmanụ agba mgbere na ‘Asọ-Rock’… ụfqdụ na eburu ego anyị e bupugasị mba ọzọ” Rev F.R. EjikeMbaka 31st December, 2014
hindi project for class 10
Unilag Senate Election Result
PROFRESSOR YEMI OSINBAJO LETTER TO YOU
BUHARI ON RELIGION -- ENGLISH
BUHARI ON RELIGION -- YORUBA
KNOW YOUR LOCAL GOVERNMENT ELECTORAL OFFICER
Act now training manual